Bayaanka Helitaanka - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Bayaanka Gaaritaanka
Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxaa ka go'an inay ka dhigto teknoolojiyaddeeda elektarooniga ah iyo macluumaadka ay heli karaan shaqsiyaadka naafada ah iyagoo la kulma ama ka badan shuruudaha labada qaybood ee 508 ee Xeerka Dhaqancelinta (29 USC 794d), sida wax looga beddelay 1998, iyo sidoo kale gobolka Washington. Siyaasadda Helitaanka 188.
Qaybta 508 waa sharci federaal ah oo u baahan wakaaladaha inay siiyaan shakhsiyaadka naafada ah u sinnaanta helitaanka macluumaadka elektarooniga ah iyo xogta u dhiganta kuwa aan naafada ahayn, ilaa culeys aan loo baahneyn lagu soo rogin hay'adda. Heerarka Qaybta 508 waa shuruudaha iyo shuruudaha farsamo ee loo adeegsado in lagu cabbiro iswaafajinta sharcigan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Qaybta 508 iyo heerarka farsamo waxaa laga heli karaa www.section508.gov.
Siyaasadda gobolka Washington ee 188 waxay dejineysaa rajada laga qabo hay'adaha gobolka in dadka naafada ah ay heli karaan oo isticmaali karaan macluumaadka iyo xogta isla markaana la siiyo marinno isku mid ah adeegyo iyo waxyaabo ay heli karaan dadka aan naafada ahayn haddii aan si toos ah loo helin suurtagal ahayn farsamo awgeed ama xadeynta sharciga. Siyaasadda buuxda waxaa laga heli karaa http://ocio.wa.gov/policy/accessibility.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama aad rabto inaad ka warbixiso arrin la xiriirta marin u helka wax kasta oo ku jira degelkan, fadlan emayl webmaster@commerce.wa.gov. If applicable, please include the web address or URL and the specific problems you have encountered.
Faylasha Adobe Acrobat
Qaar badan oo ka mid ah dukumiintiyada ku yaal goobta ganacsiga waxay ku jiraan qaabab HTML ama ASCII (qoraal fudud). Qaababkan guud ahaan waa loo heli karaa dadka isticmaala akhristayaasha shaashadda. Waxaan sidoo kale haynaa dukumiinti fara badan oo ku jira Adobe Acrobat® Qaabka Dukumintiga La Qaadan Karo (PDF).
Qaabka PDF waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo nuxurka iyo qaabeynta daabacadaha nuqulkeena adag. Daabacadaha kujira PDF waxaa la arki karaa oo la daabici karaa iyadoo la adeegsanayo Adobe Acrobat Reader®, nooca 3.0 ama ka sareeya. Waxaad ka soo dejisan kartaa oo aad ka heli kartaa caawimaad adoo isticmaalaya Acrobat Reader goobta Adobe Systems, Inc. Barnaamijka Acrobat Reader ee la soo dejisan karo ayaa laga heli karaa NO CHARGE oo laga helo Adobe.
Soo Degso Acrobat Reader
Dadka isticmaala aaladaha wax akhriya shaashadu guud ahaan ma awoodaan inay si toos ah u akhriyaan dukumiintiyada qaab PDF ah, ilaa ay ka helaan rakibidda marin-u-helid lagu rakibay nidaamkooda oo ay la socdaan Adobe Acrobat Reader. Fidintaan waxaa laga heli karaa NO CHARGE oo laga helo Adobe. Adobe sidoo kale waxay leedahay aalado onlayn ah oo u rogi doona faylasha PDF-ka HTML marka la codsado. Si aad u hesho fiilada iyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan agabka iyo adeegyada marin u helka Adobe, booqo marinka Adobe.
Soo gal Adobe
PowerPoint iyo Faylasha Faylka
Waad eegi kartaa daabacadahayada internetka ee ku jira qaabka Microsoft PowerPoint® (.ppt) haddii aad hayso nooc ka mid ah PowerPoint ku rakibay kombuyuutarkaaga. Kuwa aan haysan software-ka, Shirkadda Microsoft waxay bixisaa bilaash daawade faylka PowerPoint. Waad soo dejisan kartaa oo ka heli kartaa caawimaad adoo adeegsanaya daawadayaasha PowerPoint ee Xarunta Soo-dejinta Microsoft.
Waad ku daawan kartaa daabacaadaha qaabka Microsoft Word® (.doc) haddii aad hayso Word, nooca 6.0 ama ka sareeya, oo lagu rakibay kombuyuutarkaaga. Dukumintiyada ereyga sidoo kale waxaa lagu daawan karaa barnaamijyo kale oo badan oo kalluunka lagu farsameeyo. Intaa waxaa sii dheer, Microsoft waxay bixisaa Eray bilaash ah oo daawadayaasha faylka ah oo aad ka soo dejisan karto Xarunta Soo-dejinta ee Microsoft.
Xarunta Download Microsoft